Demo virtoaly ho an'ny vanim-potoana 2021-Vaovao momba ny orinasa-FIANGONIANA CHILI
“Raha mbola mitohy ny valanaretina coronavirus, dia nitombo avo roa heny ny varotra afomanga nataon'ny mpanjifa, anisan'izany ny sparklers sy ny afomanga. Saingy ny fampidirana avy any Sina, izay mamatsy mihoatra ny 90% ny afomanga manerantany, dia nijanona tamin'ny fiandohan'ity taona ity, ary manantena ny tsy fahampian'ny famatsiana ireo mpitarika ny indostria amin'ny andro ho avy. ”
- avy amin'ny CNN Business
Hafahafa ny vanim-potoanan'ny 2020 any Etazonia satria nofoanana avokoa ny fampisehoana afomanga 1.3G, noho izany ny firongatry ny afon'ny mpanjifa 1.4G dia mahatonga an'i Amerika ho lany entana be dia be. Raha vantany vao tapitra ny fankalazana ny faha-4 jolay, ny fampiroboroboana ny vokatra vaovao tamin'ity taona ity dia nifindra monina avokoa noho ny toe-javatra COVID-19 tsy azo ihodivirana aorian'ny fijanonan'ny fahavaratra.
Namolavola lisitry ny vokatra vaovao izahay, anisan'izany ny kojakoja amerikana misy mofo 500gram, barrage labozia romana, setroka, ary koa ny entana eropeana misy afomanga, toeram-pitrandrahana, loharano sns sns amin'ny fomba fampahafantarana mahaliana ao amin'ny horonantsary demo, mandritra izany fotoana izany, andiany vaovao no rehetra voarakitra ao amin'ny lisitry ny demo.
Volavola marika mahasarika maso, fampisehoana mahafinaritra sy milamina, tanjaky ny vovo-dronono miaraka amin'ny tempo sy feo mitempo am-po, ity no mety ho fampisehoana tsara indrindra an'ny Chili Fireworks izay voalamina hatrizay, mandehana zahao amin'ny alàlan'ny rohy etsy ambany, ny hevitrao sy ny fanontanianao dia bebe kokoa noho ny fandraisana.